Honor 8X iyo 8X Max ayaa la soo bandhigi doonaa Sebtember 5 | Androidsis
Shirkadda Huawei waxay xaqiijisay taariikhda soo bandhigidda Maamuus 8X iyo 8X Max bisha soo socota ee Sebtember 5, taas oo ka dhici karta IFA ee magaalada Berlin, Jarmalka. Tani wuxuu ku sameeyay qoraal rasmi ah, oo labadan lagu xusay xarafyada cabir weyn
Sharafta 8X aad ayaa looga hadlay maalmahan. Maanta waxaan dhihi karnaa inay dhab tahay, in ka badan sidii hore, sidoo kale sababta oo ah xaqiijinta shirkadda maalmo yar ka hor, iyo taasi waxay imaan doontaa maalmaha soo socda oo ay weheliso noocyo badan oo faa'iidooyin sare ah.
Sida ku cad xogaha kala duwan iyo muuqaalka qalabkan, sida gudaha TENAATusaale ahaan, Honor 8X wuxuu ku yimaadaa qalab enorme 7.12-inch shaashad jajab ah oo leh FullHD + xallinta 2.280 x 1.080 pixels, kaas oo lagu soo koobay 18.5: 9 qaab jajab ah. Tan awgeed, qalabka waxaa loo qoondeeyay guud ahaan phablet.
Xogta kale ee Sharafta 8X, oo ay shaaca ka qaadday TENAA, ayaa taas noo sheegaysa cabirkiisu yahay 177.57 x 86.24 x 8.13 mm miisaankiisuna yahay 210 garaam. Sidoo kale inay sidato 4 GB RAM xasuusta, meel 64 GB ah oo keydinta gudaha ah iyo 4.900 mAh baytari leh oo leh kaalmo deg deg ah. Isla mar ahaantaana, waxay ku qalabaynaysaa kamarad laba jibbaaran 16 iyo 2MP dhabarka iyo hal shidma oo 8MP ah xagga hore, taas oo la imanaysa hawlo kala duwan oo ku saleysan sirdoonka macmalka ah.
Tijaabin kale, oo uu u keenay Geekbench dhowr maalmood ka hor, ayaa muujineysa taas terminalku wuxuu leeyahay processor Kirin 710. Si kastaba ha noqotee, xog kale ayaa soo jeedinaysa inay la imaan doonto qalab octa-core Snapdragon 660 ah oo ka socda Qualcomm, sidaa darteed wax walbaa waxay ku sii jiraan jihada. Intaas waxaa sii dheer, 8X wuxuu la yimaadaa Android 8.1 Oreo oo ah nidaamka qalliinka ee hoos yimaada Huawei's EMUI 8.0.
Ugu dambeyntiina, waa in la ogaadaa in waxaas oo dhan la tilmaamay aan la hubin, marka laga reebo taariikhda soo bandhigidda. Si aan wax badan uga ogaano labada taleefan ee casriga ah, waa inaan sugnaa 5-ta bisha Sebtember.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Soo bandhigida Maamuuska 8X iyo 8X Max ayaa la xaqiijiyay bisha Sebtember ee soo socota